Jery taratra… herinandro: tena mila fifampitokisana… . | NewsMada
Par Taratra sur 23/03/2019
Navoakan’ny Ceni ny lisitr’ireo kandidà ho depiote. 862 ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina voarain’ny Ovec: 517 ny tsy miankina, 345 ny avy amin’ny antoko politika. Amin’ireo antontan-taratasy 862, nekena ny 803 ary nolavina ny 59.
Valo amin’ireo 59 nametraka ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina nolavin’ny Ceni no nitory eny anivon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), izay nanamafy ny fanapahan-kevitry ny Ceni: lavina ny firotsahan-kofidina.
Nilaza ny CFM fa an-dalana ny fifampidinihana amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina amin’ny hanaovana ho vakoka iraisam-pirenena tsy manan-batana ny fihavanana malagasy, mitondra soa ho an’ny zanak’olombelona.
Miisa 14 ireo antontan-taratasy eo an-tanan’ny Fitsarana avo (HCJ) amin’izao. Raha azo raisina ny fitoriana amin’izany, alefa any amin’ny Antenimierampirenena izay manapaka na tokony hatao ny fanenjehana na tsia ary mitsara ny HCJ.
Nilaza ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena fa hohavaozina ny fitaovana eo an-tanan’ny mpitandro filaminana hahazoany miasa araka ny tokony ho izy. Efa ho 20 izao ireo zandary nosamborina, ohatra, fa voasaringotra amin’ny asan-jiolahy.
Hampodian’ny filoha Rajoelina an-tanindrazana ireo vehivavy malagasy miasa any Koweït. Miisa 58 izy ireo: misy tsy salama, misy tsy nandray karama am-bolana maro, misy tsy manana taratasy momba azy fa giazin’ny mpampiasa, misy voatana am-ponja…
Roa no maty ary roa naratra vokatry ny fifandonana teo amin’ny mponina sy ny mpitandro filaminana tany Antalaha, faritra Sava. Anton’izany ny hetsika nataon’ny mponina noho ny tsy fahazakana ny fahatapatapahan’ny jiro any an-toerana.
Tonga ny vary mora ho an’ny sahirana, amidy 1 000 Ar eny anivon’ny fokontany amin’ny alalan’ny karnem-pokontany. Isaky ny alarobia sy sabotsy ny ivarotana azy, ary 3 kilao isan-tokantrano. Hosazina izay tratra manodinkodina ny vary.
Amin’izany rehetra izany, aiza ho aiza ny fifampitokisana amin’ny fanajana sy ny fampiharana lalàna amin’ny mpitondra sy ny entina? Na mbola mafimafy ny hoe rehefa lalàna dia lalàna…